किन हुन्छन् नेपालमा यति धेरै हवाई दुर्घटना ? अहिलेसम्म कतिपटक दुर्घट्ना भए ? (पूर्ण विवरण सहित) - Himalayan Kangaroo
किन हुन्छन् नेपालमा यति धेरै हवाई दुर्घटना ? अहिलेसम्म कतिपटक दुर्घट्ना भए ? (पूर्ण विवरण सहित)
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ श्रावण २०७३, सोमबार १५:५४ |
काठमाडौं । नेपाली आकाश असुरक्षित भएको चर्चा चलिरहेकै बेला ः पछिल्ला दिनहरुमा हवाई दुर्घटनाको श्रृङ्खला झन् बढ्दो छ । एकपछि अर्को हवाई दुर्घटनाको श्रृङ्खलामा सोमबार नुवाकोटमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटना थपिएको छ । केहीदिनअघि मात्रै हुम्लामा मकालु एयरको एउटा विमानलाई आकास्मिक अवतरण गराइयो । अवतरणका क्रममा विमानका पाइलट र कोपाइलट घाइते भए । दुर्घटनाग्रस्त विमानलाई कर्नाली नदीले वगायो ।
यसअघि फागुनमा काष्टमण्डप एयरको विमान दुर्घटना हुँदा चालक दलका दुई सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने नौ जना यात्रु घाइते भएका थिए ।
काष्टमण्डम एयरको विमान दुर्घटना भएको केही दिनअघि म्याग्दीको घोप्टेभीरमा भएको दुर्घटनामा २३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै दोलखामा गत बैशाखमा अमेरिकी सेनाको युएच १ वाई हुवे हेलिकप्टर दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित १३ को मृत्यु भएको थियो । जुन बैशाख १२ गते गएको विकासकारी भुकम्पपछि उद्दारका लागि नेपाल आएको थियो ।
त्यो दुर्घटनाको चर्चा सेलाउँन नपाउँदै सिन्धुपाल्चोकको यमुनाडाँडामा माउन्टेन हेलिकोप्टर्स ९ एनएजेपी नामक हेलिकोप्टर दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा क्याप्टेन सुवेक श्रेष्ठसहित चार जनाले ज्यान गुमाए ।
२०७१मा अर्घाखांचीको मसिने लेकमा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यी त हवाई दुर्घटनाको पछिल्लो घटना हो । नेपाली आकाशमा यस्ता थुप्रै दुर्घटना भइसकेका छन् ।
हवाई दुर्घटनाका श्रृङ्खला :
सन् १९५५ मा कालिंङगा एयरको बिमान सिमरा एयरर्पोटमा दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । जुन नेपालको इतिहासमा पहिलो हवाई मानिन्छ ।
त्यसपछि १९५६ मा इण्डियन एयरलाईन्सको विमान काठमाडौमा दुर्घट्ना हुँदा १४ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने सोही एयरलाइन्सको विमान १९५८ मा टिकाभैरभमा दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नेपाल एयरलाइन्सको बिमान १९६० मा भैरहवामा दुर्घटना हुँदा ४ जनाले ज्यान गुमाए । यस्तै नेपाल एयरलाइन्सकै विमान १९६२ मा ढोरपाटनमा दुर्घटना भयो, जुन घटनामा परी १० जनाको मृत्यु भयो । सोही कम्पनीको विमान सोही स्थानमा फेरि त्यही वर्ष दुर्घटना भयो, जसमा ६ जनाको निधन भएको तथ्यांक छ ।
१९६९ मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान बतासेडाडामा दुर्घटना हुँदा ३५ जनाको ज्यान गयो । यसैगरी १९७० मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दिल्लीमा दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भयो । सोही बर्ष रोयल फ्लाईट जोमसोममा दुर्घटना भयो, जसमा १ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै १९७२ मा रोयल्फ्लाईट धुलिखेलमा दुर्घटना हुदा ३१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
१९७५ मा नेपाल एयरलाइन्सकै विमान काठमाडौको बौद्धमा दुर्घटना हुदा ५ जनाको ज्यान गयो भने त्यसको एक बर्षपछि नेपाल एयरलाइन्सको बिमान मेघौलीमा दुर्घटना हुदा ६ जनाको मृत्यु भयो ।
१९७९ मा भिभिआईपी लाङलाङमा दुर्घटना हुदा ६ जनाको मृत्यु भयो । बिराटनगरमा सन् १९८१ मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भयो भने सोही एयरलाइन्सको बिमान १९८४ मा भोजपुरमा दुर्घटना हुँदा १५ जनाले ज्यान गुमाए ।
१९८५ मा नेपाल आर्मी सवार विमान दुर्घटना भयो। जसमा २५ जनाको ज्यान गयो । १९९२ मा थाई एयरको विमान घाङ्फेदीमा दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार ११३ जनाको मृत्यु भयो भने सोही बर्ष पिआइएको विमान भट्टेडाडामा दुर्घटना हुदा १६७ जनाको ज्यान गयो, नेपाली आकाशमा भएको बसैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो ।
१९९५ मा नेपाल एयरलाइन्सको बिमान काठमाडौमा दुर्घटना भयो जसमा २ जनाको मृत्यु भएकोे थियो ।
१९९८ मा ए.टि.एस.सि लुम्बिनी विमान म्याग्दीमा दुर्घटना हुँदा १८ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने सोही बर्ष एसियन एयरको विमान सोलुखुम्बुमा दुर्घटना हुदा ३ जनाको मृत्यु भयो । १९९८ मा नै एनएसीको विमान सोलुखुम्बुमा दुर्घटना हुँदा १ जनाले मृत्यु भएको थियो ।
१९९९ मा नोकेन एयरको विमान जुम्लामा दुर्घटना हुदा ५ जना र लुफ्थासा एयरको बिमान भसुमासुर डाडामा दुर्घटाना हुदा ५ जनाको नै मृत्यु भयो । १९९९ मा नै नोकेन एयरको विमान रामकोटमा दुर्घटना हुँदा १५ र त्यही बर्ष स्काईलाईनको विमान कमवानपुरमा दुर्घटना हुदा १० जनाको ज्यान गयो ।
२००१मा फिष्टेल एयरको विमान रारा तालमा खस्दा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । २००२ मा स्काईलाईनको विमानसुर्खेतमा दुर्घटनाहुँदा ४ जनाको मृत्यु भयो भने सोही बर्ष कास्कीमा भएको सांग्रीला एयरको विमान दुर्घटनामा परि १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सन् २००३ मा सिम्रिक एयरको बिमान एभेरेष्ट बेशक्याम्पमा भएको दुर्घटनामा भयो जसमा २ जनाले ज्यान गुमाए । २००४ मा लम्जुङमा यति एयरलाइन्सको बिमान दुर्घटना हुँदा ३ जनाको ज्यान गयो भने रामेछापमा २००५ मा एयर डाइनेष्टिकको विमान दुर्घटनामा पनि ३ जनाको नै मृत्यु भएको थियो ।
सन् २००६मा जुम्लामा यती एयरलाइन्सको बिमानमा दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु भयो भने सोही बर्ष श्री एयरलाइन्सको विमान ताप्लेजुङ्गमा दुर्घटना हँुदा २४ जनाको घटनास्थल मै मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै सन् २००८ मा अनमिनको विमान रामेछापमा दुर्घनामा पर्दा त्यसमा सवार १० जनाको ज्यान गयो भने त्यही बर्ष लुक्लामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परी १९ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
सन् २०१० मा भने २ ओटा हवाई दुर्घटना भएको इतिहास छ । मकवानपुरमा भएको अग्नी एयरको विमान दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भयो भने खोटाङ्गबाट काठमाडौंको लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सन् २०११ मा बुद्ध एयरको बिमान ललितपुरमा दुर्घटना हँुदा १९ जनाको मृत्यु भयो भने जोमसोममा भएको दुर्घटनामा १५ जनाको मृत्यु भयो ।
यसरी अन्तराष्ट्रिय नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (आइकाओ) ले नेपालको आकाश असुरक्षित भएको भन्दै विभिन्न चेतावनी दिइरहेको बेला हवाई दुर्घटना हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । उड्डयन सुरक्षाका लागि अनिवार्य मानिने बिभिन्न ८ वटा पक्षमा नेपालले न्युनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको आईकाओको तर्क छ । उड्डयन सुरक्षाका विषयमा विश्वका १ सय ४८ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा विश्वको सरदर स्तरभन्दा नेपाल १५ प्रतिशत थप कमजोर अवस्थामा रहेको आईकाओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आईकाओको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदनले नेपालको उड्डयन सुरक्षामा ५८ प्रतिशत कमजोरी रहेको देखाएको छ ।
दुर्घटनाका कारण :
विषम भू–धरातल, तिव्रगतीको मौसमी फेरबदल, पर्याप्त सूचना संकलन र प्रवाह गर्न विमानस्थमा आधुनिक उपकरणको अभाव, पुराना मोडलका जहाजमा उपयोगी प्रविधि जडान नगरिनुलगायत कारण नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको विज्ञहरुको तर्क छ ।
सन् १९५० को दशकयता जहाज दुर्घटनापछि प्रत्येक पटक छानबिन आयोग बने । तर, आयोगले दुर्घटना नदोहोरिउन भन्नाका लागि प्राविधिक र मानवीय कमजोरी हटाउन प्रशस्त सुझाव दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सन् १९४९ मा पहिलो पटक नेपालमा विमान अवतरण भएको थियो तर त्यसको ६ वर्ष पनि पूरा हुन नपाउदै सन् १९५५ को मार्च ८ मा कालिंगा एयरको जहाज सिमरामा दुर्घटना भयो र दुई जनाका ज्यान गएको थियो । त्यसयता नेपाली आकाशमा ४३ ओटा विमान दुर्घटना भएका इतिहास छ ।
Previousअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको माग वाहियात : नेताहरु
Nextधुर्मुस र सुन्तलीलाई सरकारले सम्मान गर्ने
अष्ट्रेलियामा आगामी ५ वर्षमा उच्च माग हुने काम तथा पद सार्वजनिक
१० बैशाख २०७५, सोमबार १०:४५
रेल्वे स्टेशनमा भेटिएकी केटी
१७ श्रावण २०७५, बिहीबार ०७:१८
सांसद मन्जु यादवले अर्का सांसद किशोरी साहलाई संसदीय दलकै कार्यालयमा झापड हानेपछि…
२५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०३:१२
केन्याले जित्यो टस, नेपालले ब्याटिङ गर्दै : पारस खड्का नखेल्ने
२८ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०६:१३
अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्सले अन्य राज्यका आप्रवासीका लागि बन्द गर्यो १९० भिसा इन्भिटेसन
गण्डकी मेडिकल कलेजमा प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरेर क्याम्पस प्रमुख र सीईओका छोराछोरीलाई परीक्षा
मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण पुसभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन
सीमा समस्या अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन : प्रचण्ड